A dịgasị iche iche nke ụzọ dị si n'ebe maka oge a ụwa, ndị mmadụ ịkọrọ ha data na ndị ọzọ. Na-ere ọkụ ha ka ha a DVD esetịpụ a ma ama ebe nke ha. Wee na-esure data ka a DVD, i kwesịrị ịchọ enyemaka nke a DVD ọkụ software. Ị na-achọ ndị kasị mma DVD burner maka Windows 10? A bụ ndepụta nke ọtụtụ na-ewu ewu DVD ọkụ ngwa na dị maka Windows 10 ọrụ.
Part 1: Top 10 Best DVD burner maka Windows 10
Nero nwere ike-ewere dị ka ndị kasị ewu ewu DVD-ere ọkụ software dị ruo ụbọchị. Ụlọ ọrụ a n'ebe ebe 1995 na ndị mmadụ n'akụkụ ọ bụla nke ụwa iji ya maka na-ere ọkụ data n'ime oghere DVD. The 2015 ụlọ abịa tinyere na a dịgasị iche iche nke elu atụmatụ gụnyere ike iji ọkụ DVs, idetuo DVD na edezi videos na ihe oyiyi. Nero DVD burner maka Windows 10 nwekwara ike na-elekọta nke usoro nke compressing gị akwụkwọ tupu ere ha n'ime disk. Ikike iji wepụ ụda ndia tupu na-ere ọkụ n'ime disk nwere ike-ewere dị ka a pụrụ iche mma na pụrụ ịchọta Nero 2015.
Mụta ihe banyere Nero 2015 >>
2. Ashampoo-ere Ọkụ Studio 14
Nke a bụ a siri ike DVD ọkụ usoro dị na ahịa. Ọ nwere ike ịnapụta maara oru achọ disks ka ọrụ. Ụlọ ọrụ a n'ebe ebe na 1999 na ha na-metụtara ihe ndị kasị seasoned ọkụ oru ngo. Ọ ga-eji na-esure DVD, idetuo DVD na-akpali ihe ndekọ dị gị mobile ngwaọrụ n'ime DVD. Ọ nwekwara ike iṅomi NonCommercial disks na-enyere gị aka dezie vidiyo ma ọ bụ ihe oyiyi tupu na-ere ọkụ.
Mụta ihe banyere Ashampoo-ere Ọkụ Studio 14 >>
3. adịchaghị BurnAware
BurnAware a ghọtara dị ka a na-ewu ewu DVD-ere ọkụ software na-ezukọ ọtụtụ ndọpụ mkpa. Ha na-agụnye edegharị disks na adịrị ọdịyo faịlụ. Mmepe gụnyere atọ dị iche iche wepụtara na ụlọ. Otu n'ime ha nwere ike iji na ọkụ DVD. Ọ bụrụ na ị na-achọ bụ isi DVD burner maka Windows 10 na ụfọdụ ndị ọzọ na peculiarities, ị nwere ike na-eche nke na-aga maka nke a.
Mụta ihe banyere BurnAware adịchaghị >>
Nke a bụ ihe magburu onwe ngwa dị na-eme ka onye DVD. Otú ọ dị, ọ na-kpọmkwem haziri maka disk ọkụ na ị ga-enwe ike ime ihe ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ oyiri DVD, ị ga-mkpa-achọ enyemaka nke ọzọ ngwa. Ị nwere ike ịchọta ụfọdụ ndị ọzọ ngwa kere site Aiseesoft na ike ga-eji iji tọghata PDFs, idetuo DVD na itinye aka na edezi aga-eme. Ọ bụrụ na ị chọrọ atụmatụ ndị a, ị ga-mkpa iji kwụọ ụgwọ maka ha iche iche.
Mụta ihe banyere Aiseesoft DVD burner >>
5. EarthSoft DVD-ere Ọkụ
Ọ bụrụ na gị ebumnobi bụ isi ka oyiri DVD, nke a bụ software na ị ga-azụ. Nke a DVD burner maka Windows 10 abịa tinyere na a dị mfe ma dị ọcha interface. Ọ nwere ike na-eme ka zuru ezu duplicates nke videos. Otú ọ dị, ngwá ọrụ a ga-eji na uka mbiputegharị nke DVD ozugbo. The mfe interface ga-nyere gị na-anọ n'ebe hassle na ịrụ rụọ ọrụ nke ọma mgbe a na-edegharị DVD.
Mụta ihe banyere EarthSoft DVD-ere Ọkụ >>
Express Ọkụ ike ga-eji na-esure a dịgasị iche iche nke disks gụnyere DVD. Ọ nwekwara ike-eji na-esure ISO foto. Otú ọ dị, ọ na-apụghị-eji na-oyiri NonCommercial DVD dị ka ọ na-adịghị ihe ọ bụla nyopụta ike. Nke a software e mere maka edegharị na duplicating DVD enweghị scrambling ogologo. Ọ bụ oru oma n'oge Iṅomi na mbiputegharị usoro. Ị na-nyere na ole na ole mmachi edezi nhọrọ.
7. Mmanya 120% DVD-ere Ọkụ
A bụ ihe ọzọ na-ewu ewu DVD-ere ọkụ ngwá ọrụ na-pụrụ ịchọta ahịa. Ọ nwere ike oyiri DVD na egwuregwu, tinyere ndị ọzọ writable diski. I nwekwara ike iji ngwá ọrụ a na-eme ka disk oyiyi. Nke a DVD burner maka Windows 10 abịa tinyere na nnukwu ọnụ ọgụgụ nke freeware ngwa. Ọ bụrụ na ị na-adịghị họrọ ihe ị kwesịrị ị na wụnye n'oge echichi, ị ga-aga site na-akụda mmụọ usoro nke wepụ ndị freeware aka. Mmanya 120% ike ga-eji na-idetuo ọkachamara disks dị ka mma. Eziokwu a keere òkè bụ isi n'azụ ya ewu ewu n'etiti ụwa nke oge a kọmputa ọrụ. Ọ nwekwara ike ịnapụta a ngwangwa arụmọrụ ka ọrụ.
Leawo DVD burner a maara nke ọma n'ihi na ya unscrambling ike. Na mgbakwunye na, a dịgasị iche iche nke otutu atụmatụ nwere nwaa kọmputa ọrụ na-emefu ego a DVD burner maka Windows 10. Ha na-agụnye ọmụmụ interface na elu oyiri mma. Ọ nwere ike na-decrypt, dọwara na idetuo DVD n'ime diski ike nke na kọmputa gị dị ka mma. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike iji otu software isure na data n'ime a DVD mgbe e mesịrị. Ọ awa niile atụmatụ ndị a site otu n'elu ikpo okwu na ya so a otutu kwupụta ewu ewu na nke Leawo.
Mụta ihe banyere Leawo DVD burner >>
Ọ bụ ezie na VOVSoft ike ga-eji na-esure a dịgasị iche iche nke writable diski, ọ na-arụ ọrụ ka mma na DVD. Ya mere, VOVSoft-mara dị ka Switzerland agha mma na ụwa nke ngwa anya disk na-enwu. The DVD ọkụ usoro bụ n'ụzọ kwụ ọtọ na ọ ga-enye gị ohere na-anọ n'ebe hassle. The oru oma ngwá ọrụ nwekwara ike-eji dọwara DVD na idetuo data n'ime diski ike gị.
Nke a DVD burner maka Windows 10 nwere ikike ịnapụta magburu onwe ya mma ndapụta ka ọrụ. Ọ ga-anapụta akara gị n'elu fọrọ nke nta niile akụkụ nke Iṅomi usoro. I nwekwara ike iji ndabere ntọala ka ọ na-eme ọrụ maka gị. Otu ihe pụrụ iche atụmatụ na nwere ike hụrụ na DVD Cloner bụ na ọ ga-eji na-idetuo kpụchara akpụcha DVD. Ọ bụrụ na ị na-achọ na-adaba adaba usoro inye ndụ azụ gị mebiri emebi DVD, nke a bụ ihe kasị mma nhọrọ dị si n'ebe ahịa na-agbalị. Ọ nwekwara ike inyere gị aka oyiri DVD na dọwara data n'ime ike mbanye.
Mụta ihe banyere DVD Cloner >>
Part 2: More Option nke onye Advanced & Professional DVD burner maka Windows 10
Wondershare DVD Creator Bụ nke zuru okè na mfe iji DVD burner na bụ compatibel na Windows gụnyere Windows 10, na lateste Windows 10. tụnyere niile DVD-ere ọkụ ngwaọrụ n'elu, o nwere ya pụrụ iche uru. Na wuru na-mma DVD menu ndebiri, i nwere ike ike a pụtara DVD karịa mgbe. Na ọkụ usoro bụ ọtụtụ ihe ngwa ngwa dị ka ị ga-atụ anya na tupu ị na-achọpụta na ọ na-ọkọnọ ziri ezi n'ihu gị.
Na-akwado na-ere ọkụ vidiyo na ọ fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu video formats.
Burns videos ka a ọkachamara DVD na 40 + professionally e menu ndebiri.
Personalizes videos na menu ndebiri dị ka ọchịchọ gị tupu na-ere ọkụ Disc.
Enyere gị ike na-akpa ọchị foto ngosi mmịfe ịkọrọ enyi na ndị ikwu.
Olee otú Ọkụ Video ka DVD na Wondershare DVD Creator maka Windows 10 (Windows 10 gụnyere)
Mgbe nbudata na na na wụnye a Wondershare DVD burner, dị nnọọ ịdọrọ na dobe faịlụ gị na ngwa, ma ọ bụ pịa "Import" na interface.
Pịa "Ọkụ" button na ala nke a software, ma họrọ gị chọrọ DVD format si DVD diski, DVD na nchekwa ma ISO faịlụ.
> Resource> Windows> Top 10 Best DVD burner maka Windows 10